कतै तपाईलाई पनि हर्ट अट्याट पो हुदै छ की ? पहिले नै यस्ता संकेत देखा पर्ने छन, बेवास्ता नगरौ -मृत्युबाट बचौं – सुदूरखबर डटकम
कतै तपाईलाई पनि हर्ट अट्याट पो हुदै छ की ? पहिले नै यस्ता संकेत देखा पर्ने छन, बेवास्ता नगरौ -मृत्युबाट बचौं
label सुदूर खबर संवाददाता query_builder March, 26 2019
एजेन्सी, यो अति जरुरी जानकारी सबैमा सेयर गरौँ । हृदयघात युवा वयष्क या वृद्धवृद्धा जुनसुकै उमेरमा पनि अकस्मात हुन सक्छ, यो घातक शव्दको नाम सुन्दा पनि धेरैलाई डर लाग्छ । आज सबै ठिक ठाक रहेको मानिस भोली मृत्युको मुखमा पुगिसकेको हुन्छ, यो जतिखेर पनि जहाँ पनि आउन सक्छ ।
हृदयघातका कारण हरेक वर्ष धेरै मानिसको मृत्यु हुन्छ । बूढाबूढीलाई मात्र हृदयघात लाग्छ भन्ने होइन । यौवनावस्थामा रहेका व्यक्ति पनि यसको शिकार हुन्छन् । हृदयघात हुनुभन्दा एक महिनापहिले नै यसको लक्षण देखिन शुरु गर्छ । यसमा ध्यान दिँदा यसको खतराबाट बच्न सकिन्छ ।
▶️अन्य भागमा पीडा
▶️– छाती वा शरीरका अन्य भागमा पीडा भयो भने हृदयघातको संकेत हो ।छाती बाँउडियो भने त पक्का हृदयघातको लक्षण हो ।सास
▶️– सास लिन गाह्रो भयो भने पनि हृदयघातको लक्षण हो । यस्तो समस्या महिलाहरूमा
▶️बढी देखिन्छ ।पाचनतन्त्रमा गडबडी
▶️– पाचनतन्त्रसँग जोडिएका समस्या छ भने बेवास्ता नगर्नुस् । यो पनि हृदयघातको लक्षण हुनसक्छ ।
▶️– लगातार तनाव, चिन्ता र डर महसूस गर्नुहुन्छ भने सम्भावित हृदयघातको लक्षण हुनसक्छ
▶️– कसरत वा हिँडडुल गर्दा अत्यधिक पसिना आउनु त सामान्य कुरा हो र अकारण पसिना आयो भने चाहिँ हृदयघातको लक्षण
▶️हो ।गोडा फुल्ने
▶️– मुटुलाई शरीरका अन्य अंगमा रगत पु–याउन समस्या आएमा शिराहरू फुल्छन् ।
यो फुल्नु भनेको हृदयघातको लक्षण हो ।
▶️– धेरै दिनसम्म नसा र ढुकढुकी तीव्र गतिमा दौडिरहेका छन् भने बेवास्ता नगर्नुस् र चिकित्सकलाई अवश्य देखाउनुस् । शरीर
असारमै सकियो साढे २ खर्ब
आजदेखि बढ्यो इन्टरनेटको मूल्य
नियमावलीले नेपाली कांग्रेसमा विवाद